लकडाउनमा बालबालिकालाई कसरी बचाउने ?
लकडाउनमा बालबच्चालाई कसरी खुशि र सुरक्षित राख्ने ?
यो बेला बिश्वभर मानिसहरू त्राहिमाम छन् । गतबर्षबाट जब कोरोना भाइरसले संसारलाई मृत्युको झट्का दियो तबदेखि नै मानिसहरूको मनमा एककिसिमको त्रास पैदा भएको छ ।
फेरि दोस्रो लटको भेरियन्टले नेपाललाई नराम्रोसंग सुतायको छ । मृत्युको गन्ति छैन । बिज्ञहरू तेस्रो भेरियन्टले बालबालिकालाई जोखिममा पार्छ भनेर भविष्यवाणी गरिसकेका छन् । गतबर्ष लकडाउन हाम्रो यो पुस्ताको पहिलो अनुभव थियो ।पाका मान्छेहरू त रोगको डरले सकिनसकी घरभित्रै थुनिन सकेका थिए । बालबालिकाको चन्चलेपनलाई थेग्न गाह्रो थियो ।यस्तो बेला बालबालिका फ्रेस हुन सक्दैनन् । उनीहरूमाथि पारिवारिक दवाव, पढाईको प्रेसर हुन्छ । घरमा यो नगर त्यो नगर, पढ पढ पढ मात्रै रट लगाउदा उनिहरू दिक्क मान्छन् । अब कसरी उनिहरूलाई फ्रेस बनाउने त्यता ध्यान दिनु जरूरी छ ।
गतबर्षको लकडाउनका बेला कतिपय बालबालिकाहरू हिंसामा पनि परे । अहिले हामीलाई केही त शिक्षा दिएको छ लकडाउनले ।
लकडाउनको बेला घरभित्र बस्दा बच्चालाई एकोहोरो पढ पढ को रट नलगाउनुस् । केहस समय भान्सामा सहयोग माग्नुस उसको रूचिको खानेकुरा बनाउनुस खुशीले सहयोग गर्छ र केही पकाउन पनि सिकिहाल्छ ।त्यसको फाईदा अरूबेला पनि सहयोग गर्ने रपकाउन सिपालु हुने हुन्छ ।
अब बच्चालाई साथै राखेर टिभीमा मुभिज हेर्नू । मूभि छनोट आज उसलाई गर्न दिनुस भोलि तपाईं आंफै गर्नु ।यसो गर्दा तपाईंले उसलाई पुराना तथा परम्परागत,नैतिक शिक्षाप्रद र धेरै मारधाड नभएका मुभि रोज्नुस् । बच्चालाई कार्टुन अति मन पर्छ । एकदुई भाग संगै कार्टुन पनि हेरिदिनुस र रमाईदिनुस यसो गर्दा उसले आफुलाई फ्रि भएको महसुस गर्छ । मूभी हेर्दा ऐतिहासिक कुराहरू देखे पछि उसमा जिज्ञासा बढ्छ । फलतः ईतिहासलाई खोज्ने हौसला पनि मिल्छ । दिनहुँ एउटै कामले दिक्क लाग्छ । केही अरू पनि काम थपौं । अब बच्चाहरूलाई उमेर अनुसारको योगा सिकाउनुस् र गराउनुस् । मशल बन्छ । ताजगी महसुस गर्छ । समय पनि कट्छ ।
अब बच्चाहरूलाई बाहिर निकाल्नुस् कम्पाउण्डबाट होइन नि । हुन त सबै घरमा छैनन् । धेरै भाडामा बस्नेहरूलाई गाह्रो छ तर घरबेटीले बुझ्नुपर्यो । कौसिमा, छतमा खेल्न दिनुस एकछिन खुला हावा खान दिनुस् । यताउताका हरियाली रनवन देखाउनुस । सम्भव भए र यदि घरमा हुनुहुन्छ भने कौसिका गमलाहरू तरकारीका बिरूवाहरू चिनाउनुस, त्यसका काम फाईदा बताउनुस् । यस्तै वातावरणलाई जोडेर सानो तिनो कथा निर्माण गर्नुस् र रोचकताका साथ सुनाउनुस् बच्चाले पक्कै रमाइलो मान्ने छ ।
एकछिन हजुर आफैले भनिदिनुस् ल बाबू नानी मोबाइलमा गेम खेल । जतिबेला सुकै खेल्नु हुदैन आँखा खराब हुन्छ एकछिन खेल भनेर दिनु भयो भने उसले दवाव महसुस गर्न पाउदैन ।
शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रका बिद्यालयहरूले अनलाईन कक्षा सन्चालन गरेका छन् । प्रभावकारी त कति छ तर अहिलेको अप्ठेरो परिस्थितिमा त्यसलाई सकारात्मक मानेर पढ्नुपरेको छ । पढ्यो पढ्यो जाँच हुन्छ रिजल्ट आउँदैन । बच्चाहरूलाई तनाव हुन्छ त्यसैले स्कुलहरूले पनि अनलाईन क्लासबाटै जाँच लियर रिजल्ट समयमै दिनु भयो भने बच्चालाई फेरि पढ्न पनि जाँगर आउँछ । त्यसैले स्कुलहरूले पनि ध्यान पुर्याईदिनुहोला । पढ्दा सुन्दा नर्मल र सामान्य लागे पनि यति मात्रै गरे पनि हाम्रा बालबालिकाले लकडाउनको समयमा उपलब्धि मूलक कुराहरू सिक्नेछन्, सुरक्षित हुनेछन् र पारिवारिक वातावरणमा घुलमिल पनि हुनेछन् । विपत्तिलाई अवसर बनाउन पनि जान्नुपर्छ ।